2021 Magacyada Abaalmarinta Fannaaniinta Sharafta Leh Oo Furan
Ma taqaanaa farshaxan xirfad shaqo oo waara oo ku yaal Minnesota? Machadka McKnight wuxuu ku martiqaadayaa magacaabis abaalmarinteeda 24aad ee Faneed ee Farshaxanka leh. Magacaabista abaalmarinta $50,000 waxaa la rabaa May 28, 2021.
Abaalmarinta Farshaxanka Quruxda ee McKnight ee sannadlaha ah waxay aqoonsan tahay fanaaniinta iyagu sameeyey ballanqaad cimri dheer oo ka dhan ah abuurista farshaxanka gudaha, gobolka, iyo / ama qaran ahaan muhiim ah. Farshaxannadan waxay doorteen inay noloshooda iyo xirfadahooda ka dhigtaan Minnesota, ayaga oo ka dhigaya gobolkayaga meel dhaqan ahaan hodan ku ah. Marka ugu horreysa, waxay sameeyeen hal abuur farshaxan oo ka turjumaya aragtidooda gaarka ah iyo kuwa aan caadiga ahayn. Farshaxanada xiisaha leh ee 'McKnight' sidoo kale waxay dhiirrigelisay fanaaniin da 'yarta ah, soo jiidasho ka timid dhagaystayaasha, maamulayaasha, dhaleeceeyayaasha, iyo xirfadleyda kale ee fanka, qaarkoodna waxay aasaaseen oo xoojiyeen ururo farshaxan.
Magacaabistu waxay xirmaysaa May 31, 2021.
Ogsoonow: Codsiyada waxaa kaliya lagu aqbalaa internetka. Fadlan ha u dirin wax alaab ah oo DAA laxiriira xafiiska McKnight maadaama shaqaaluhu ay hada si fog uga shaqeynayaan Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid habka magacaabista, fadlan emayl u soo dir msalas@mcknight.org.
NAGU SAMEE ARTIST
Haddii aad jeceshahay inaad aragto muunad ka mid ah su'aalaha magacaabista ka hor intaadan bilaabin hawsha, fadlan halkaan riix.
Mawduuca: Farshaxanka, The McKnight Award leh abaalmarinta Artist Artist
Caynsanaanta Saxaafadda ee Farshaxanada Maryan Rendon
Caynsanaanta Saxaafadda ee Farshaxannimada Jim Denomie